Iindaba - Ulondolozo lweNsimbi yePipe yokwenza uMatshini
Ngophuhliso lwamashishini, ukusetyenziswa kombhobho wokwenza umbhobho ongenasici ongenasici kuya kusanda, nokuba ukugcinwa kwesixhobo ngasinye endaweni, kuchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho wemveliso, kunye nobomi benkonzo yezixhobo. Ulondolozo olulungileyo lunokuphucula ukhuseleko kunye nozinzo, ukuqinisekisa ukuba imveliso yokugqitywa komgangatho ophezulu. Kodwa ukuba awuqhelananga nentsimbi yetyhubhu yokuhombisa ityhubhu yomatshini, unokungakwazi ukuqala ulondolozo. Ke oku kulandelayo kuya kwazisa umsebenzi wolondolozo kumatshini wokulawula umbhobho wentsimbi ongenasici, ndiyathemba ukuba unokukunceda.
1. Uqwalaselo lombane lweyunithi yensimbi engenasici yokunyusa umbane isebenzisa umgaqo wokuguqula isantya sokuhamba.
2. Isakhelo esithe tyaba sisakhelo esijikelezayo, ukujikeleza kwibhokisi ye-turbo-worm kunye nokudibanisa, okwenza ukuba iyunithi isebenze ngakumbi ukuze isebenze kwaye izinze ngakumbi ukuqengqeleka.
3. Ukwenza umatshini kunye nobukhulu buqhutywa yimoto enye enesakhiwo esihambelanayo. Isondlo silula, kwaye kulula ukusebenza.
4. Ukuseta impompo yeoyile yomatshini wokulinganisa ngaphakathi, nangona kukho isihluzo sangaphakathi, abathengi kusafuneka benze umsebenzi wokucoca rhoqo ukuqinisekisa ukuba impompo yeoyile ayivalwanga. Ukuhamba komoya woluvo lweoksijini kufuneka kucocwe rhoqo ukuthintela ioyile eninzi ekuvaleni nasekujikelezeni okufutshane.
5. Isakhelo sokulayisha samkela isixhobo esijikelezayo esine-enant-link cantilever kabini reel indlela, enokuthi yenzakale ngexesha lokusebenza kweyunithi, elinokunciphisa ixesha lokulungiselela kwaye lenze ukuba iyunithi iveliswe ngokuqhubekayo ngaphandle kokugoba inaliti.
6. Indawo emi nkqo inokuhlengahlengiswa ngokuthe tye okanye ngokukodwa kwisiseko, kwaye inokuhlengahlengiswa ngokuthe nkqo.
7. Isiseko sentonga yokuluka kweesilinda zokuguba ezimbini zokuqala kunye nendawo yokuqengqeleka kulungelelwaniso zinokuhlengahlengiswa, kwaye umphetho wentsimbi uyapolishwa kumacala omabini esalathiso esime ngxi. Iziko lokugqibela liziko le-welder, kwaye i-weld seam isemgangathweni ngqo kwi-angle ye-degrees ezingama-90 ukuya kwindawo ehamba phambili, okwenza ukuba impembelelo ibe ngcono.
8. isakhelo esithe tyaba sineendlela ezimbini ngaphandle kwesakhelo sohlalutyo, xa isidingo sokubuyisela ivelvet, sikhulule iibholiti zangaphandle zokulungisa iibholiti, ukunciphisa isakhelo kumacala omabini ngokwahlukeneyo, uhlengahlengiso oluguquguqukayo.
Oku kungasentla malunga nomsebenzi wolondolozo onxulumene nentsimbi yolawulo lokuhombisa ityhubhu yomatshini, ndiyathemba ukuba inokukunceda.